Al-Shabaab oo sare u qaadeen dhaca
Ururka dilaaga ah ee gacan-ku-dhiiglaha ah ee al-Shabaab ayaa la sheegayaa inuu ka tanasulay ka ganacsiga dhuxusha, iyadoo warbixin dhawaan lagu sheegay in ganacsigaas uu ka doortay uruurinta lacagaha iyo xoolaha uu ugu yeero zakawaadka.
Sida warbixintu sheegeyso, dhaq-dhaqaaqa argagixiso ee ururka ayaa hoos u dhacay waxaana loo aaneynayaa in taasi sababtay dhaqaale xumada uu ku sugan yahay, iyadoo uu door-biday inuu sii xoojiyo lacagaha baadka ah ee xaaraanta ah ee uu ka uruuriyo ganacsatada iyo xoolaha uu ka fara maroojisto xoola-dhaqatada masaakiinta ah.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab waxaa danta ku khasabtay inuu ka tanasulo ka ganacsiga dhuxusha maaddaama dowladda Soomaaliyeed ay dadaalkeeda ku aaddan ka hortagga dhaqaalaha soo galo al-Shabaab iyo xiridda waddo kastoo ururku ka helo dhaqaale.
Waxaa si aad ah loo wiiqay awoodda dhaqaale iyo tan milatari ee ururka al-Shabaab, wuxuuna door-biday inuu sare u qaado dhaca cad ee xoolaha xooladhaqatada iyo miraha beeraleyda. Sida ay sheegeen dad ka soo goostay ururkaas, wuxuu si joogta ah si arxan darro ah lacago uga dhacaa ganacsatada iyo xoola-dhaqato.
Waxaase ururku hortaagan dadweynaha iskooda isu abaabulay ee la dagaallamaan ururkaas, kuwaasoo ka daalay in maalin walbo xoolahooda si sharci darro ah looga qaato, iyadoo ururrada noocaan ah ee waayahan dambe aad u soo bateen ayna dagaallo xooggan ku qaadaan saldhigyada iyo xarumaha canshuurta ee uu leeyahay ururka dilaaga ah ee al-Shabaab.